Ny sakafo 4 mampidi-doza indrindra amin'ny fahavaratra | Bezzia
Ny sakafo 4 mampidi-doza indrindra amin'ny fahavaratra
Toñy Torres | 21/07/2021 23:55 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Ny sakafo sasany dia mety hampidi-doza amin'ny fahavaratra sy ho an'ny kely e ny fanaraha-maso tsy mampidi-doza dia mety hiteraka aretina lehibe. Ny hafanana be amin'ny fahavaratra no mahatonga ny fielezan'ny bakteria, holatra ary mikraoba isan-karazany mandoto ny sakafo. Vokatr'izany, rehefa mifandray amin'ny vatana izy ireo dia mety hiteraka olana lehibe toy ny fanapoizinana ara-tsakafo.
Zavatra izay tsy isalasalana fa fantatra ary Toy ny fitsipika, dia mifamatotra amin'ny fihinanana sakafo ao amin'ny bara, trano fisakafoanana sy toerana anaovana sakafo. Na izany aza, ny fandinihana sy ny antontan'isa dia manondro fa ny ankamaroan'ny fanapoizinana ara-tsakafo amin'ny fahavaratra dia miseho ao amin'ny tontolo anatiny. Izay mampiseho fa ny fikarakarana tena ilaina dia tsy entina amin'ny sakafo ao an-trano.
1 Ny lisitry ny sakafo mety hampidi-doza mandritra ny fahavaratra
1.1 Ireo hamburger
1.2 Vokatra miorina amin'ny atody
1.3 Ovy natsatsika
1.4 Ilay akoho
Ny lisitry ny sakafo mety hampidi-doza mandritra ny fahavaratra
Ny mampidi-doza kokoa azy ireo amin'ny fahavaratra dia tsy midika hoe tsy afaka amin'ny ririnina izy ireo. Izany hoe, maro amin'ny ny sakafo amin'ny toe-piainana ratsy izay lanina dia vokatry ny fikirakirana ratsy. Manafaingana ny fizotrany ny maripana ambony, saingy tsy mahasakana azy ny hatsiaky ny ririnina. Noho izany, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mitandrina hatrany rehefa mikarakara sakafo.
Raha ny amin'ny ny loza ateraky ny fahavaratraMampidi-doza kokoa ny sakafo sasany satria lany mandritra ny vanin-taona mafana. Ny hena vaovao izay nohanina amin'ny barbecue ary mandany fotoana be amin'ny hafanana alohan'ny handrahoana, ny salady miaraka amin'ny mayonnaise an-trano tsy misy fampangatsiahana azy dia ohatra vitsivitsy ihany. Fa ny lisitry ny sakafo mampidi-doza mandritra ny fahavaratra dia lava, Ireo no 4 amin'ireo sakafo mitondra loza mitatao indrindra.
Ny hena izay ampiasaina hanomanana hamburger dia mifangaro karazam-biby maro, izay tsy fantatra amin'ny ankapobeny. Rehefa miatrika biby isan-karazany dia lehibe kokoa ny risika ao anaty hamburger toy izay amin'ny cutlet na hena iray avy amin'ilay biby iray ihany. Etsy ankilany, ny hena voatoto dia manana vava sy vano maro izay mety hiparitahan'ny bakteria ary sarotra kokoa noho ny hafanana ny mahatratra ny tapany iray manontolo.
Tsy manadino izany ny kintan'ny barbecue fahavaratra no hamburger. Noho izany dia ilaina ny mitazona ny hatsiaka mandra-pahatongan'ny fotoana hametrahana ny hena hahandro. Raha tsy manapaka ny rojo mangatsiaka ary tsy manana ny hena any ivelany tsy misy fiarovana.
Vokatra miorina amin'ny atody
Ny atody dia sakafo mahasalama tokoa, na dia mety hampidi-doza aza. Salmonella dia iray amin'ireo bakteria miely ao amin'ny atody ary ny aretina aterak'izy ireo tena lehibe. Mba hisorohana an'izany, raha manomana sakafo misy atody alaina any ivelan'ny trano ianao dia aleonao mampiasa solo-solo toy ny roe. Tsy ho an'ny fanomanana mayonnaise ihany fa ho an'ny omelette Espaniôla sy saosy hafa miorina amin'ny atody.
Tena tsara, tena salama ary ny namana tonga lafatra ho an'ny barbecue, fa mety hampidi-doza amin'ny fahavaratra. Amboarina ny ovy dia ampiasaina ny foil aluminium ary vokarina ao anatiny izany loharanon'ny hafanana izay, rehefa miparitaka, dia lasa mandomando. Raha atsatsika ovy ianao ka tsy lany daholo, tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana na ovay ho sakafo hafa, toy ny ovy nopotsehina.
Ity hena manankarena sy mahasalama ity dia iray amin'ireo marefo sy mampidi-doza indrindra, indrindra amin'ny fahavaratra ary raha tsy misy ny fitandremana ilaina. Ny henan'akoho dia tsy tokony hosasana mihitsy alohan'ny handrahoana, ny tanana sy ny kojakoja ao an-dakozia dia tokony hadio foana rehefa mikarakara hena. Ary ny tena zava-dehibe, henan'akoho dia tsy maintsy masaka tsara foana alohan'ny fihinanana.
Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo amin'ny fahavaratra dia ny fitandremana fatratra. Aza adino velively fa momba ny sakafo izany, na dia mahafinaritra aza ny fotoana. Raha hiaraka amin'ny olon-kafa ianao ary afaka very mora foana amin'ny sakafo ianao, mifidy lovia hafa azo omanina mialoha izany. Aza maka risika ary aza manadino fa ny fahatsiarovana sakafo ratsy manimba anao amin'ny fahavaratra mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Ny sakafo 4 mampidi-doza indrindra amin'ny fahavaratra
Fanamafisana ara-pientanam-po amin'ny mpivady